Momba anay - Hebei Jiuhe Hengye Fastener Manufacturing Co., Ltd.
Hebei Jiuhe Hengye Fastener Manufacturing Co., Ltd., izay hita ao amin'ny Yongnian, Handan, Faritanin'i Hebei. Vokatra lehibe: tsaramaso mahery vaika, tsaramaso mahery matevina, voan-tanjaka ho an'ny firafitra vy, tsaramaso manokana ho an'ny firafitry ny vy, sns. Ny orinasa dia namolavola, ankoatr'izay, mihatsara, ary ankehitriny ny tranobentsika dia manana fitaovana antitra, izay nahazatra ny fantsom-pamokarana mangatsiaka manokana, toy ny tsaramaso, sakana, bolts, hex bolte ， flange Bolt ， U Bolt ， fantsom-pahefana herinaratra. Ny orinasa dia manana ekipa mahay za-draharaha sy tontolo iainana tsara.
Hebei Jiuhe Hengye Fastener Manufacturing Co, Ltd dia andiam-pikarohana siantifika, famokarana, fitantanana ho iray amin'ireo orinasa manara-penitra feno. Jiuhe Hengye dia mifikitra hatrany amin'ny filozofian'ny raharaham-barotra momba ny "manatsara ny hasina sy ny kalitao mandresy an'izao tontolo izao", manao fampiharana mafy ny kolontsaina orinasa «integrité, responsabilité, fiaraha-miasa ary fizarana», ary miezaka ny hamorona ny «qualitation» «Jiuhe Hengye». Mifanaraka amin'ny rehetra amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa, ny filan'ny mpanjifa maika, mieritrereta ny eritreritry ny mpanjifa, manaraka ny fomba fandresen'ny roa tonta ary mamorona sanda ho an'ny mpanjifa.
Nandritra ny fotoana ela, ny mpanamboatra Jiuhe Hengye dia manana laza malaza amin'ny indostrian'ny fastener amin'ny alàlan'ny rafitra fanamafisana kalitao tonga lafatra, rafitra fitantanana hentitra, ny famokarana matanjaka ary ny fanamafisana efa lasa ary ny fanamafisana. Ny vokatra dia amidy tsara amina faritany 20 sy autonomous any Chine, ary mahatoky fatratra sy atokisan'ny mpanjifa ary nahazo kalitao tsara.
Miaraka amin'ny orinasa malaza iraisam-pirenena maro mamolavola sy namokatra entana ho anay, ny vokatra avy any dia naondrana any Hong Kong, Korea Atsimo, Japon, Australia, Britain, Eropa ary Moyen Orient.
Ny zavatra rehetra ilainao mba hamoronana tranokala tsara tarehy